Archive du 20170825
Tompon’ny Z&Z Center Maty nisy nitifitra teny Tsaralalàna
Maty nisy nitifitra omaly hariva teny Tsaralalàna ny « Consul honoraire »-n’i Malaysie Zahid Razah.
Filoha sy Praiminisitra Mandany andro mifanipy hoditr’akondro
Mampahatsiahy ny zava-nitranga tamin’ny governemanta Jean Ravelonarivo ny zava-misy ankehitriny.
Taratasin’i Jean Manao an-jorony
Ahoana ry Jean a ! Dia tena efa ataonareo an-jorom-bala mihitsy moa izahay ankehitriny an ! Marina raha ataonareo tafiditra ao anaty aferanareo intsony fa efa tena lasa aty ivelany tanteraka mihitsy.
Raharaha Mamy Rakotoarivelo Efa voaray ny valin’ny « Autopsie », saingy…
Nanambara ny teo anivon’ny borigady misahana ny heloka bevava etsy Anosy, omaly, fa efa eo am-pelatanan’izy ireo ny valin’ny fitiliana natao mikasika ny fomba nahafatesan’ilay tompon’andraiki-panjakana teo aloha, Mamy Rakotoarivelo.
Fikambanana VAR Hamory vahoaka etsy amin’ny kianjan’ny Kanto
Taorian’ireo fitetezam-paritra efa vitan’izy ireo dia anjaran’Antananarivo indray izao no akan’ilay fikambanana Vahaolana Anio sy Rahampitso (VAR) hevitra hijerena izay
Hetsika Rohy Maniry ny hampian’ny fitondrana
Nosokafana tetsy amin’ny esplanade Analakely omaly alakamisy 24 aogositra ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fiarahamonim-pirenena.
Ligin’ny Volley-Ball Analamanga Hifarana amin’ny alahady ny taom-pilalaovana 2017
Hangotraka ny famaranana ny taom-pilalaovana 2017 eo amin’ny taranja volley-ball eto amin’ny ligin’Antananarivo amin’ny alahady 27 aogositra izao etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina.
Rallye - Tompondakan’i Madagasikara Anio zoma no hanomboka ny dingana faha-4
Hanainga anio zoma eny amin’ny Cci Ivato ireo mpifaninana 23 handray anjara amin’ny dingana faha-4 ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2017 karakarain’ny Tmf Rallye sy ny Asacm.
Baolina kitra vehivavy « Division Elite » Vita omaly ny antsapaka
Taorian’ny dingana voalohany notontosaina tany Mahajanga ny 4-12 aogositra 2017 teo dia hiatrika ny dingana faharoa eny amin’ny kianjan’i Carion eto Antananarivo manomboka ny 25 aogositra izao ka hifarana ny sabotsy 2 septambra 2017 ireo ekipa 8 ao anatin’ny baolina kitra vehivavy "Division Elite".
Tsy maharototra ny fanjakana ankehitriny izany fahoriam-bahoaka efa mby an-tendakely izany, fa ny ataony ihany no ataony. Sesilany ny asan-jiolahy, faty olona, lozam-pifamoivoizana, fahantrana,…
Loza mahatsiravina teny amin’ny “Digue” 2 maty, potipotika ilay mpamily
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray teny amin’ny Làlana Digue, teo amin'ny “Rond Point” mihazo an’Ambodihady Ambohimanarina,
Arsivan’ny tranombokim-pirenena Avadika ho nomerika
Nitsidika ny tranombokim-pirenena Anosy sady toerana misy ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny asa tanana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly.
Rafi-panabeazana vaovao Tsy vahaolana mahomby, hoy ny filohan’ny Aneffa
Na faran’izay raitra aza ny fandaharam-pampianarana hajoro eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana amin’io taona ho avy io dia tsy hampahomby na inona na inona, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny Aneffa na ilay fikambanan’ireo mpampianatra fram,
Nidina ny taham-pahafahana bakalorea 44, 48% ho an’Antananarivo
Hivoaka amin’ny fomba ofisialy anio zoma 25 aogositra ny valim-panadinana bakalorea ho an’ny Faritanin’Antananarivo.
Miss Jeunesse Madagascar Razafimahaleo Daniellah no lany
Razafimahaleo Daniellah, tovovavy kely vao 16 taona avy any Fianarantsoa no lany hisalotra ilay anarana Miss Jeunesse Madagascar taona 2017.
Cybercriminalité Olona telo no voasambotry ny polisy
Nihasarotra tanteraka tato ho ato ny asa natrehin’ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fikarohana ireo jiolahy eto amintsika amin’ny alalan’ny fanaraha-maso ny antso hataon’izy ireny.
Fanaovana “kidnapping” Karohana fatratra Rams sy Jenny
Mpivady vao herotrerony, teratany Malagasy monina ivelan’Antananarivo Renivohitra no anisan’ny lohandohan’ny mpisorona amin’ny fakana an-keriny eto amintsika amin’izao fotoana.
Ny masoivoho Malagasy any ivelany no tena mandany ny volam-panjakana, hoy i Lilie Razafimbelo avy amin’ny firaisamonim-pirenena CCOC.
Tsy hita anefa ny tena fiantraikany, ary fanontaniana napetrany ny hoe tena miady ho an’ny fiaraha-miasa tokoa ve ireny, ary mitondra tombotsoa ho an’ny firenena izy ireny ?